Deg deg:Iska horimaad dhimasho & dhaawac dhaliyey oo saaka ka dhacay Hargeysa – SBC
Deg deg:Iska horimaad dhimasho & dhaawac dhaliyey oo saaka ka dhacay Hargeysa
Posted by editor on Febraayo 29, 2012 Comments
Ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhintey tiro kalena way ku dhaawacmeen rabshado hubaysan oo ka dhacay magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka la magac baxay Somaliland, kuwaasi oo dhexmarey ciidamada Booliiska iyo dad mudahaaradyo dhigayey.
Rabshadaha ayaa bilwoday ka gadaal markii ciidamada Booliiska oo taageeraya shaqaalaha dawlada hoose ee magaalada Hargeysa ay bilaabeen inay xoog ku muquuniyey ganacsatada danyarta ah ee ku ganacsada magaalada gaar ahaan bartamaha, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay ku ganacsadaan qaab sharci daro ah, balse dadka ganacsatada ah iyo dadweyne kale oo taageeraya ayaa wadooyinka isku soo baxay kuwaasi oo rabshado kala hortagay ciidamada booliiska iyo dawlada Hoose.
Dadka isu soo baxay oo ka careysnaa go’aanka dawlada hoose ayaa bilaabay inay kala gooyaan wadooyinka ayna xanibaan isu socodka dadka iyo gaadiidka, iyagoo waodoyinka ku gubay taayiro, dhigaynna jidgooyooyin.
Dhawaaqa rasaasta ayaa laga maqlayaa gudaha magaalada waxaana taagan jawi kacsan iyo xaalad dagaal waxaana laga cabsi inay kordhaan rabshada iyadoo dadka dhaawaca ah loola cararay goobaha caafimaadka.
Wixii warar ah ee arintan ku soo kordha kala soco SBC, saacadaha soo socda Insha ALAAH.